5 Àgwà Na-eguzosi Ike n'Ihe Ndị Ahịa Na-achọ Si Ahịa na Ahịa Gị | Martech Zone
Fraịde, Machị 4, 2016 Saturday, March 5, 2016 Douglas Karr
Brett Evans bụ ezigbo ahịa ahịa obodo ma dụọ m ọdụ ka m gụọ Ọsọ Chama Aka: akingchịkwa Mkparịta ụka Ndị Ahịa n'ime otu n'ime ọtụtụ mkparịta ụka anyị banyere overlap nke ahịa na ahịa.
Dabere na nyocha zuru oke nke ọtụtụ puku ahịa ahịa gafee ọtụtụ ọrụ na ala,Aka Aka Aka Aka rụrụ ụka na kpochapụwo mmekọrịta ụlọ bụ a adịkwa obibia, karịsịa mgbe ọ na-abịa na-ere mgbagwoju, nnukwu-ọnụ ọgụgụ azụmahịa na-azụmahịa ngwọta. Ọmụmụ ihe ndị ode akwụkwọ ahụ chọpụtara na ahịa ọ bụla na-ere ahịa n'ụwa na-adaba n'otu n'ime profaịlụ dị iche iche ise, ebe ụdị ndị a niile nwere ike iwepụta arụmọrụ ahịa, naanị otu onye - Challenger na - enye nnukwu ọrụ oge niile.
Adịghị m nnukwu mmasị nke akwụkwọ ahịa. M na-ahụkarị ha overhyped na pushing usoro nwere ike ịkpali ụfọdụ ahịa ndị, ma ọ bụghị ihe niile. Amaara m ndị ịtụnanya dị ịtụnanya na-azụlite mmekọrịta karịa afọ na nnukwu nkwekọrịta, amaara m na ndị ahịa tụkwasịrị obi n'agbanyeghị ụlọ ọrụ ha na - arụ ọrụ - na - akpọta ndị ahịa site na mba rue mba, amatakwara m na ndị ahịa na - apụ apụ na - enwe obi ụtọ ekwentị niile ụbọchị na n'ụzọ ụfọdụ na-eme atụmanya n'ime nkeji ole na ole ka ụgbọala ha na-nzọụkwụ ọzọ.
Akwụkwọ a dị ezigbo iche - na-akụda ndị ahịa dị iche iche ma na-enye ụfọdụ nyocha na-enweghị isi. Ọ bụghị naanị na-atụle mkpali na aghụghọ nke ndị na-ere ahịa, ọ na-enye nghọta zuru oke banyere ihe ndị ahịa na-achọ n'usoro ire ahịa ahụ. Ndị na-esonụ bụ àgwà 5 kacha elu, dị mkpa, na ndị ahịa na-achọ mmekọrịta ha na onye nnọchi anya ahịa:
Rep na-enye echiche pụrụ iche na nke bara uru na ahịa
Rep na-enyere m aka ịnyagharịa uzo ozo
Rep na-enye Ndụmọdụ ma ọ bụ ndụmọdụ na-aga n'ihu
Rep na-enyere m aka zere ogbunigwe ndị nwere ike ịpụta
Rep na-akuziri m ihe ohuru na nsonaazụ
Notice hụrụ nkwenye, ikike mkparịta ụka, ịgbalite, ọsọ ọsọ, ma ọ bụ njirimara ọ bụla dị n'elu 5 ahụ? Nope. N'ezie, e nwere àgwà abụọ ndị ọzọ mfe ịzụta site na inwe nkwado zuru ebe niile na nzukọ.
Hụ myirịta dị n'etiti ụdị ụdị ahịa ị na - achọ inweta na ụdị usoro ịre ahịa ọdịnaya ị na - eme maka atụmanya gị na ndị ahịa gị? Olileanya, ị na-ahụ ihe m na-ahụ! Ka anyị dochie okwu:
Ọdịnaya gị na-enye echiche pụrụ iche na nke bara uru na ahịa
Ọdịnaya gị na-enyere m aka ịnyagharịa uzo ozo
Ọdịnaya gị na-enye Ndụmọdụ ma ọ bụ ndụmọdụ na-aga n'ihu
Ọdịnaya gị na-enyere m aka zere ogbunigwe ndị nwere ike ịpụta
Ọdịnaya gị na-akuziri m ihe ohuru na nsonaazụ
Mic dobe! All nke àgwà ndị a na-arụtụ aka n’otu ihe - iwulite ha abụọ ntụkwasị obi, ikike, na uru oge na-aga na atụmanya na ndị ahịa. Ndị ahịa kachasị mma mara nke a bụ otu ha si emechi azụmahịa… yana ọdịnaya kachasị mma na ndị otu ọhaneze na-ere ahịa maara na ọ bụ otu ha nwere ike isi mechie azụmahịa, ma ọ bụ mee ka atụmanya gafere site na ntugharị ntụgharị, ma ọ bụ nyere ndị otu ahịa ha aka inweta asọmpi ahụ.
Tags: brent adamsonmkparịta ụka ndị ahịaezi ndị ahịaiguzosi ike n'ihemattthew dixonàgwà ahịaonye na-ama aka mgba